Firefox 87 yasvika nenhau shoma uye kusakosha kwakakosha | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 87 ikozvino yave kuwanikwa, asi ayo mashoma matsva anoita kuti tifunge nezvekusavapo
Mavhiki mana mushure software v86, Mozilla yaburitsa masikati ano Firefox 87. Kuve chikuru kuvandudza, vazhinji vedu takatarisira kuti ichasvika nenhau dzakatanhamara, asi hazvina kunge zvakadaro. Muchokwadi, zvaitarisirwa kuunza shanduko huru, asi iyo fox navigator kambani yakafunga kudzoka shure uye kuibata kwenguva yakati rebei. Icho chinhu chavanotaura kuti vanogona kuzviita, asi kashoma ivo vanotisiya isu neuchi pamiromo yedu. Ivo vangangozviita nekuti hauna kunyatsogadzirira, saka uchafanirwa kuve nemoyo murefu.
Mozilla yakanga yaronga kuwedzera rutsigiro rwekumisikidza mifananidzo yeAVIF, uye ndiyo yaive inozivikanwa inozivikanwa yeFirefox 87 muchikamu chayo chebeta chisina kusvika kune yakagadzikana vhezheni. Asi kushamisika hakuna kunge kwakakura kwazvo kune avo vanowanzo famba neiyo beta vhezheni yebrowser, nekuti kutsakatika kwekutsigirwa chinhu chavakaita mazuva mashoma apfuura. Izvo zvasvika ndiyo runyora rwemashoko yaunotevera, panotaridzika matanho matsva ekuchengetedza
Pfungwa dzeFirefox 87
Isu zvino tichawana mashoma webhusaiti mabhureki mukuvanzika kubhurawuza uye yakasimba yakavandudzwa yekutevera kudzivirirwa ne SmartBlock, iyo inopa yekuwedzera zvinyorwa zvemawebhusaiti kurodha mushe.
Kuti uwedzere kuchengetedza kuvanzika kwedu, iyo nyowani yekusarudzika yeHTTP yekudzora mutemo inodzora nzira uye kubvunza tambo ruzivo kubva kune anotumira misoro kudzivirira nzvimbo kubva netsaona kudonhedza inonzwisisika mushandisi dhata.
Iyo "Simbisa Yese" ficha muKutsvaga paPeji ikozvino inoratidza mamaki ekutarisa padhuze nebhaini yekupururudza inoenderana nenzvimbo yemitambo inowanikwa pane iro peji.
Yakazara rutsigiro rweMacOS yakavakirwa-mukati screen muverengi, VoiceOver.
Nzvimbo nyowani: Silesian (szl).
Ivo vabvisa zvinhu kubva kuLaibhurari menyu izvo zvaisashandiswa kazhinji kana kuve nedzimwe nzvimbo dzekuwana mubrowser: zvakawiriraniswa tabo, zvichangobva kuitika, uye homwe homwe
Ivo vakarerutsa iyo Rubatsiro menyu nekudzora zvinhu zvisingawanikwe, senge izvo zvinonongedzera kumapeji ekutsigira Firefox ayo anogona zvakare kuwanikwa kuburikidza neGamuchira Rubatsiro chinhu.
Iwo mavhidhiyo ekudzora izvozvi ane anoonekwa ekutarisisa maitiro uye iyo vhidhiyo uye odhiyo madhiraivhu izvozvi anokwanisa kufamba nekhibhodi.
HTML ikozvino inotaurwa nevanoverenga screen.
Firefox ikozvino inogadzira inobatsira yekutanga tarisiro mune iyo Plugin Manager.
Firefox inozopisa zita / rondedzero shanduko yechiitiko kana zvirimo zveeriia -zvinonyorwa / zvinotsanangurwa zvichichinja.
Kune izvi isu tinofanirwa kuwedzera chitsva chisiri pachinyorwa chepamutemo, asi tinogona kutora mukana weFirefox 87: basa idzva rekumisikidza iyo yemasikati kana yehusiku maitiro kana webhusaiti ichipa mukana uyu.
Firefox 87 yakatangwa zviri pamutemo masikati ano, saka inogona kutotorwa kubva yayo yepamutemo webhusaiti. Isu vashandisi veLinux tinokwanisa kurodha bhainari vhezheni kubva ipapo, uye ichakurumidza kuoneka seyekuvandudzwa mumasoftware ekusiyana kweLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 87 ikozvino yave kuwanikwa, asi ayo mashoma matsva anoita kuti tifunge nezvekusavapo
Manjaro 21.0 Ornara yakaburitswa, iine Linux 5.10 uye yakagadziridzwa desktops
Mautic kuisirwa paUbuntu 20.04 uye Apache